महाकाली अस्पतालमा कागजमा मात्रै भेन्टिलेटर- सुदूरपश्चिम - कान्तिपुर समाचार
१५ जना कोरोना संक्रमितलाई राखिएको महाकाली अस्पतालमा तीमध्ये कसैलाई पनि गम्भीर समस्या आए उपचार गर्न सकिने अवस्था नरहेको चिकित्सक बताउँछन् ।
जेष्ठ २४, २०७७ भवानी भट्ट
कञ्चनपुर — सुदूपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले आफ्नो फेसबुक पेजमा कोरोना संक्रमणको अवस्था, स्वास्थ्य सामग्रीको मौज्दात, क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन बेड तथा त्यहाँ बस्नेहरूको संख्या र परीक्षणको अवस्थाबारे दिनहुँ अपडेट गरिरहेको हुन्छ ।
त्यही पेजमा डेढ महिनादेखि महाकाली अस्पतालमा दुईवटा भेन्टिलेटर रहेको उल्लेख छ । तर यहाँ हालसम्म भेन्टिलेटर जडान त परै जाओस्, खरिद नै भएको छैन ।
महाकाली अस्पतालमा अहिले कञ्चनपुरका ८ र कैलालीका ७ गरी यहाँ १५ जना कोरोना संक्रमितको उपचार भइरहेको छ । कैलालीको धनगढीस्थित सेती प्रादेशिक अस्पतालमा कोरोना संक्रमितका लागि बनाइएका आइसोलेसन बेड भरिएपछि चौमालाका संक्रमितलाई महाकाली अस्पताल पठाइएको हो । यहांँ पनि अब १ बेड मात्रै खाली रहेको अस्पतालले जनाएको छ ।
‘अहिलेसम्म सबैको अवस्था सामान्य छ, कुनै समस्या छैन,’ महाकाली अस्पतालका डा. सरोज आचार्यले भने, ‘तर कसैमा पनि श्वासप्रश्वास लिन वा अन्य गम्भीर समस्या देखिए यहाँ उपचार हुन सक्ने अवस्था छैन ।’ उनका अनुसार अक्सिजन दिँदा पनि श्वासप्रश्वासमा समस्या रहिरहे भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ । तर यहाँ भेन्टिलेटर नै छैन ।
महाकाली अस्पतालमा भेन्टिलेटरसहित विभिन्न उपकरण खरिदका लागि प्रदेश सरकारले १ करोड बजेट निकासा गरेको थियो । सोहीअनुसार अस्पताल प्रशासनले चैत दोस्रो साता टेन्डर पनि आह्वान गरेको थियो । आरजी सप्लायर्सलाई ५३ लाखमा ठेक्का दिइएको थियो । तर सप्लायर्सले सम्झौताविनै दुइटा भेन्टिलेटर, पेसेन्ट मोनिटर, ब्लड ग्यास एनालाइजर र डिफिलेटर अस्पताल पुर्‍यायो । तर ती सबै सामग्री पुरानो र खिया लागेको भेटिएपछि ठेक्का प्रक्रिया नै रद्द गरिएको थियो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले समेत पुराना भेन्टिलेटरको छानबिन गर्न बायोमेडिकल इन्जिनियर हरेन्द्र चटौतलाई पठाएको थियो । उनले सम्पूर्ण सामग्री जाँच गरी मन्त्रालय र अस्पताल प्रशासनलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा फिलिप्स कम्पनीको भेन्टिलेटर सन् २०१५ को अन्तिमतिर बनेको, अक्सिजन पाइप र ट्रलीमा खिया लागेकोलगायत त्रुटि औंल्याएका छन् । अस्पताल प्रशासनकै मिलेमतोमा ती पुराना सामग्री ल्याइएको अस्पताल विकास समितिले आरोप लगाएको छ । सामाजिक सञ्जालमा भेन्टिलेटर खरिदमा कमिसनको खेल भएको व्यापक चर्चा भएपछि सप्लायर्सलाइ नै उपकरण फिर्ता गरियो ।
‘भेन्टिलेटरसहितका उपकरण खरिदका लागि पुनः टेन्डर प्रक्रिया सुरु गरिएको छ,’ महाकाली अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. हरि श्रेष्ठले भने, ‘जेठ २८ मा टेन्डर खोलिनेछ, असार दोस्रो हप्ताअगाडि भेन्टिलेटर उपलब्ध हुने सम्भावना छैन ।’ उनका अनुसार अस्पताल विकास समितिले यसअघि नै खरिद गरेको भेन्टिलेटरसमेत प्रयोगमै नआई बिग्रिएको छ । बिरामीमा गम्भीर समस्या देखिए सेती प्रदेशिक अस्पतालमै पुर्‍याउनुको विकल्प नरहेको श्रेष्ठले बताए ।
एक महिनाभित्र काम सम्पन्न गर्ने गरी वैशाख पहिलो साता ठेक्का सम्झौता भएको कोरोना अस्पताल निर्माणको काम अझै सकिएको छैन । निर्माण कम्पनीकै कारण हालसम्म काम पूरा नभएको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ ।
महाकाली अस्पताल परिसरमै ५० बेडको कोरोना अस्पतालको छुट्टै भवन निर्माणका लागि विपिन विल्डर्ससँग चैत अन्तिममा ९७ लाख रुपैयाँमा सम्झौता भएको हो । ‘म्याद थप गरेर पनि अझै काम सकिएको छैन,’ अस्पतालका मेडिकल रेकर्डर नारद भट्टले भने, ‘९०/९५ प्रतिशत मात्रै काम भएको छ ।’ निर्माण कम्पनीले लकडाउनमा सामग्री तथा कामदारको अभाव भएकाले समयमै काम गर्न नसकिएको जनाएको उनले बताए । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले महाकाली अस्पतालमा छुट्टै कोरोना अस्पताल निर्माणका लागि १ करोड बजेट पठाएको थियो ।
प्रकाशित : जेष्ठ २४, २०७७ ११:३८
मानिसहरु ‘पृथ्वी–सहर’ सम्बन्ध विश्लेषण गर्न गलत तथ्य र साँघुरा तर्कको सहारा लिन्छन् । तर, सहरको घोरविरोधी वा घोर समर्थक मात्रै बनेर ‘पृथ्वी–सहर’ सम्बन्ध बुझ्न सकिन्न ।
जेष्ठ २४, २०७७ राम गुरुङ
मान्छेको अर्थतन्त्रमा ‘सहर’ घुसेको झन्डै ६,५२० वर्ष भयो । गएको ७०० वर्षदेखि सहर सुख र समृद्धिको विम्ब बनेको छ । जागिर खाने, व्यापार/व्यवसाय गर्ने र सम्पत्ति कमाउँदै त्यसको उपभोग गर्नेबाहेक अहिलेका लागि सहरको अर्को विकल्प छैन । गाउँमै बस्नेले पनि आफ्ना चीजबीज सहरमा बेचेर सुख आर्जन गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छन् ।
मान्छे, जनावर वा पर्यावरण, कुनै न कुनै हिसाबमा सहरसँग जोडिएकै छन् । तर, थुप्रिँदै गएको ढुंगामाटो, सिमेन्ट, गिट्टी, बालुवा, इँटा वा फलामले भने सहरलाई पृथ्वीको जीवन सेलाउने ब्रह्मनालजस्तो बनाउँदै छ ।
अहिले पृथ्वीको केन्द्र नै सहर हो । हावापानी, माटो, पशुपन्छी सबै सहरतिरै खिचिएका छन् । यसलाई प्रविधि र सूचनाले ऊर्जा दिएको छ । गएको दुई पुस्तामा सहरी जीवन मानवीय इतिहासमै लोभलाग्दो र अत्याधुनिक पनि बनेको छ । तर, सहरले पृथ्वीलाई जसरी भोगचलन गरिरहेको छ, त्यो पृथ्वीकै भविष्यमाथि प्रश्न उठ्ने खालको छ । सहरबारे चर्चा गर्दा मान्छेहरू बाँडिन्छन् । ‘पृथ्वी–सहर’ सम्बन्ध विश्लेषण गर्न गलत तथ्य र साँघुरा तर्कको सहारा लिन्छन् । तर, सहरको घोर विरोधी वा समर्थक मात्रै बनेर ‘पृथ्वी–सहर’ सम्बन्ध बुझ्न सकिन्न ।
आजका धेरैजसो सहर एउटै पुर्खाबाट जन्मिए । त्यो पुर्खा इसापूर्व ४५०० को अरेबियन पठार (अहिलेको सिरिया र टर्की) को मेसोपोटामिया सहर थियो । करिब ३,९४२ वर्षअघि नै छालाका टायरवाला चारपांग्रे गाडा बनाउने यो सहरको प्रगति लोभलाग्दो थियो । यसले खेती र व्यापार गर्‍यो । त्यसपछि मानिसमा सम्पत्ति र सुखको तिर्खा बढ्यो । लाखौं वर्ष लामो मान्छे र पृथ्वीको सम्बन्ध फेरियो । पृथ्वी मान्छेको अधीनमा गयो । खनिज तथा पर्यावरणको प्रयोग मानिसले आफू बाँच्न मात्रै गरेन, मान्छेले यसलाई निजी सम्पत्ति थुपार्ने स्रोत पनि बनाए ।
यातायात र सञ्चारको विकास भएको थिएन । यसले गर्दा मेसोपोटामियाको सहरी नक्कललाई पृथ्वी परिक्रमा गर्न करिब साढे चार हजार वर्ष लाग्यो । तथापि गाडामै सीमित व्यापार भने पालडुंगा (सेलबोट) चढेर विश्वभर पुग्न थालिसकेको थियो । पोर्तुगाली क्याप्टेन इस्तिभाओ गमेजले मेसोपोटामियाको युरोपियन नस्ललाई ३,००० वर्षपछि सन् १५२५ मा अमेरिकाको न्युयोर्क पुर्‍याउँदा, त्यहाँका आदिवासी अद्यापि जमिनमाथि खनजोत गर्दै थिए । पोर्तुगाली सम्राट् जोन तेस्रोको नाफाको भोकले पोर्तुगाली व्यापार न्युयोर्कसम्म पुगेको थियो । व्यापारले न्युयोर्कलाई उत्तरी गोलार्द्धको केन्द्र बनायो । अहिले न्युयोर्क १०० वर्षभित्रै विश्व–वित्तीय सत्ताको बादशाह भइसकेको छ ।
महाभारतमा द्वारका, अयोध्या तथा भुवनेश्वरजस्ता प्रख्यात सहर नभएका होइनन् । नेपालमै पनि तिलौराकोट वा कान्तिपुरजस्ता समृद्ध सहर थिए । तर, दक्षिण एसियामा युरोपियन ढर्राको सहर आइपुग्न भने झन्डै २,८३४ वर्ष लाग्यो । सन् १६८६ मा ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीले कलकत्तामा व्यापार सुरु गरेपछि नै आधुनिक (?) सहर एसिया पसेको हो । चन्द्रशमशेरले सन् १९२२ मा नेपाल ल्याएको गाडी र जुद्धशमशेरले सन् १९३६ मा विराटनगरमा खोलेको जुटमिललाई पछ्याउने हो भने मेसोपोटामियाको सहरी रवाफ नेपाल आइपुग्न करिब ३,१७० वर्ष लाग्यो । हजारौं वर्षमा नेपाल आइपुगेको युरोपियन ढर्राको सहर, गएको ३० वर्षमा दक्षिण एसियामै सबैभन्दा छिटो विस्तार भइरहेको छ ।
उत्पादन, वितरण र उपभोगको त्रिवेणी नै सहर हो । यसले मानिसलाई सुख नै दिएको छ । सहरमा बस्ने धेरैको उन्नति पनि भएको छ । सहर अत्यन्तै छिटोछिटो बन्दै छ । यसको निर्माणमा जे प्रयोग भएको छ, त्यो (फलाम, तेल आदि) मान्छेले उत्पत्ति गर्न सक्ने खालका होइनन् । पृथ्वीमाथि निर्भर यी कुराको प्रयोग मुख्यतः किनबेचमा अल्झिएका छन् ।
मेसोपोटामियाले विश्वलाई नाफा के हो सिकायो । झन्डै २,९२२ वर्षपछि युरोप पुगेको व्यापारको स्वादले दुनियाँका सहर नाफामय बने । नाफाले पृथ्वीको ढुंगामाटो र वनपाखा सबै खोतल्न थाल्यो । कोइला र फलामका खानी पृथ्वीको तलतिर पसे । खानीहरू यति गहिरा भए, कोइला निकाल्न खानीभित्र पसेका मजदुर नै बाहिर फर्केनन् । ती खानीभित्रै जमेको पानीमा डुबेर मरे । तैपनि तिनले निकालेका कोइला र फलामले पृथ्वीका सयौं कारखाना चलिरहे ।
खानीमा सामान्य औजार प्रयोग हुन्थे । विशिष्ट प्रविधि र औजार नहुँदा खानीभित्र जम्ने पानीले खानी पुरिरहन्थे । मागअनुसारका फलाम वा कोइलाको आपूर्ति भएन । तर, जब सन् १६८० मा स्पेनका थोमस सेभरीले खानीबाट पानी तान्ने बाफ–इन्जिन बनाइदिए, पृथ्वीको इतिहासले नै कोल्टे फेर्‍यो । पृथ्वीमाथि कष्ट आइलाग्यो । सहरको समृद्धि नै पृथ्वीभित्र खनिने खानीमाथि उभियो । पृथ्वी भत्काउँदै सहर बन्न थाले । लाखौं वर्षमा बनेका खनिज, सयौं वर्षमा हुर्केका जंगल, केही दकशमै खपत भए । सन् १८०४ मा बाफ–इन्जिनलाई रेलमा जोडियो । कोइलाको धूवाँले रेल र पानीजहाज चल्न थाले । बाफ–इन्जिन बनेको १२० वर्षमै लन्डन र बेइजिङ व्यापारले जोडियो । युरोपियन व्यापार पृथ्वीको तीन चौथाइ भागमा पुग्यो ।
सत्रौं शताब्दीयताको ३०० वर्षमा सहर व्यापारमा खुम्चिएन । पृथ्वीमा भएका कोइलादेखि जंगली जनावरसम्म उपभोग गर्ने थलो बन्यो । सहरमा बस्नु, घर बनाउनु मान्छेका लागि प्रगति र प्रतिष्ठाका विषय भए । यसले सिमेन्ट, फलाम, तेल वा कोइला मात्र होइन सुनचाँदीको उत्खनन पनि बढायो । यो नै पृथ्वीमाथि भइरहेको बेलगाम सहरी दोहनको शृंखला हो । सहरको टाउको र पुच्छर नै आर्थिक वृद्धिले जोडेको छ, जसलाई सजिलै बुझिन्न । तर, अलिकति घोत्लिने हो भने यो छर्लंग देखिन्छ । सहरमा जे भइरहेका छन्, ती सबै मानिसलाई ‘अरू–केही–चीज’ थप्न उक्साउने खालको छ । जागिरेले तलब र व्यापारीले नाफा थप्न चाहन्छन् । उद्योगीले अरू थप उत्पादन गर्न खोज्लान् । हो, यस्तै अरू केही गरौं वा थपौं भन्ने होडले नै करिब ६०० वर्षदेखि सहरका हातखुट्टा तन्किरहेका छन्, जसले पृथ्वीको ज्यान बिगारेको छ ।
जब मान्छेले सम्पत्ति वा सुख थप्छ सामान्यतः त्यो नै आर्थिक वृद्धि हो । तर, मानिसले जे–जति थपेको छ, त्यो सबै मान्छेको एक्लो मिहिनेत वा आविष्कारले मात्रै होइन । ती आविष्कारलाई पृथ्वीका खानी, पानी, ढुंगा–माटो, वनजंगल र पशुपन्छीले अकाट्य साथ दिएको छ । मान्छेको आवश्यकताको सूची लामो छ । ठूला घर, गाडी, धेरै बैंक ब्यालेन्स खोज्नु सहरको विशेषता हो । यसले सहरको महत्त्व झनै चुलिएको हो । बढ्दो घरबास र जनसंख्याले घर, गाडी र बाटोको माग पनि बढेको छ । बढेको मागले पृथ्वीको दोहनलाई ऊर्जा दिएको छ । सहरमा भइरहेको फलाम, सिमेन्ट, बालुवा आदिको खपत सहरी इतिहासमै उच्च विन्दुमा पुगेको छ, जसको मूल स्रोत पृथ्वी हो । तर, यसका सीमा छन्, जसलाई अनन्त उत्खनन गर्न सकिन्न ।
पृथ्वी खन्दै पुरिँदै छ सहर
भौतिक विज्ञान र इन्जिनियरिङमा मानिसको अभूतपूर्व चमत्कार सहरकेन्द्रित छन् । लामा फलामे पुल, हजारौं हवाइजहाज, हजारौं रेल गुड्ने रेल–वे र रेल, सानासाना छडीमा अडिएका असंख्य विशाल भवन आदिले मानिसलाई ‘सुखी’ बनाएको छ । अद्भुत भनिएका भौतिक विज्ञान वा चामत्कारिक भनिएका विविध इन्जिनियरिङ– सबैको खुट्टा पृथ्वीमा पाइने जैविक इन्धन, पानी, ढुंगामाटो र फलाममा उभिएको छ । यसको मूल लक्ष्य नै सहरको समृद्धिमा ठोक्किन्छ ।
पृथ्वीमा भएका खनिज (फलाम, तेल, वा अन्य), ती केही वर्षमा बनेका होइनन् । न ती खनिज मान्छेले बनाएको हो । यी त हजारौं/लाखौं वर्षमा बनेका हुन् । अस्ट्रेलियाको ह्याम्स्ले प्रदेशमा गरिएको अध्ययन (२०१४) ले एक टन फलाम बन्न कम्तीमा पच्चीस सय वर्ष लाग्ने तथ्य निकालेको छ । तर, अहिले विश्वमा एकै दिन करिब १४ करोड मेट्रिक टनसम्म फलाम खपत भइरहेको छ । सन् १९५३ यताको ६७ वर्षमा सहर बनाउन मात्रै झन्डै ४ खर्ब मेट्रिक टन फलाम खर्च भयो ।
वर्ल्ड स्टिल एसोसिएसन (२०१९) का अनुसार, सन् २००४ यता सहरलाई बर्सेनि करिब १६ अर्ब मेट्रिकटन फलाम चाहिन्छ । अब पृथ्वीमा लगभग २ खर्ब मेट्रिकटन फलाम बाँकी छ । यही गतिमा खपत भइरहे अबको २० वर्षमा पृथ्वीमा भएको फलाम करिब सकिनेछ । तर, पृथ्वीमा अझै झन्डै ४० प्रतिशत जनसंख्यालाई सहरमा बसाउनै बाँकी छ ।
तेलकै कुरा गरौं । सहर मात्रै बढेको छैन, सवारीसाधनको माग र चापमा पनि उस्तै वृद्धि भएको छ । हरेक दिन विश्वलाई ९ करोड ब्यारेल तेल चाहिन्छ । यो पहिलेको भन्दा ४४ प्रतिशतले बढी हो । बर्सेनि ३६ अर्ब ब्यारेल तेल खपत भइरहँदा, अब १६ खर्ब ब्यारेल तेल पनि बाँकी छैन । यसले मुस्किलले अबको ३७ वर्ष जति धान्ला । यसपछिको अवस्था के होला भन्न सकिन्न ।
इन्टरनेसनल इनर्जी एजेन्सी (२०१९) ले भन्छ— सहर बनाउन र यसलाई अन्य भूगोलसँग जोड्न बर्सेनि ३९ अर्ब १७ करोड मेट्रिकटन सिमेन्ट चाहिन्छ । यति सिमेन्ट बनाउन हरेक वर्ष करिब ४२ अर्ब मेट्रिकटन क्लिंकर (विशेष प्रकारको ढुंगामाटो) पृथ्वीबाट निकालिन्छ । सिमेन्ट एसोसिएसन (२०१७) लाई आधार मान्दा नेपालमै पनि सन् २०२३ सम्ममा सिमेन्टको खपत बर्सेनि १० करोड टनमाथि पुग्ने अनुमान छ । निर्माणमा चाहिने अन्य सामग्रीको आधिकारिक तथ्यांक नै छैन ।
बढ्दो जनसंख्याले सहरिया घरमा उपभोग गरिने फर्निचरको माग चुलिएको छ । फर्निचरका लागि जंगल व्यापक फाँडिएका छन् । फुड एन्ड एग्रिकल्चरल अर्गनाइजेसन (२०१८) का अनुसार, फर्निचर बनाउन लगभग १४ अर्ब क्युबिक मिटर काठ खपत भइसकेको छ । एउटा रूखबाट मुस्किलले २५ क्युबिक मिटर काठ निस्कन्छ । फर्निचरकै लागि बर्सेनि करिब ५५ लाख रूख ढालिन्छन् । विश्वमा बर्सेनि ७० वर्गकिलोमिटर र दैनिक करिब २०० वर्गमिटर वनजंगल मासिइरहेका छन् ।
पृथ्वीबाट गरिने उत्खनन ट्यांकीमा पानी भरेजस्तो होइन, जसलाई रित्तिएपछि भर्न सकिन्छ । सहर बनाउने काम बढेसँगै फलाम, इँटा वा बालुवाको खपत बढेको छ । पृथ्वी पनि रित्तिँदै छ । सहरले गरिरहेको अत्यासलाग्दो खपत मान्छे वा पृथ्वी, कसैको दिगो हितमा छैन । पछिल्ला दशकमा भएका खपत छोटो समयमा छिट्टै भइरहेका छन्, यसले पृथ्वीलाई क्षतविक्षत पार्दै छ ।
प्रकाशित : जेष्ठ २४, २०७७ १०:५४
शुक्लाफाँटामा बाघको मृत्यु
रहेनन् मोहन्याल गाउँपालिकाका अध्यक्ष रावल
करणी प्रयास आरोपमा शिक्षक पक्राउ
सुदूरपश्चिममा मनाइयो होली
बसको ठक्करबाट कैलालीमा १ जनाको मृत्यु, स्थानीयद्वारा प्रदर्शन